Home » Vaovao momba ny fiaramanidina » Hong Kong-Singapore Bubble Fahafenoana ny fangatahana dia lavitra momba ny fitsangatsanganana
Bubble fitsangatsanganana an'habakabaka Hong Kong Singapore
Tamin'ny 15 Oktobra, Hong Kong sy Singapore dia nanao fifanarahana ifotony hananganana bilble fitsangatsanganana an'habakabaka roa tonta (ATB), izay mamela ny fivezivezena miala sasatra eo anelanelan'izy ireo hanomboka amin'ity volana ity amin'ny volana Novambra. Izany dia niteraka ny famotsorana eo noho eo ny fangatahana mihoampampana ary voaporofon'ny fikarohana Coneuct3d nataon'ny orinasa mpanadihady momba ny dia ForwardKeys, tamin'ny herinandro taorian'io, dia nitady fitsangatsanganana avy any Singapore mankany Hong Kong ny sidina, izay efa fisaka hatramin'ny nanombohan'ny COVID-19 ny krizy, nisondrotra hatrany amin'ny 50% amin'ny ambaratonga 2019, raha toa ka nitombo 30% ny famandrihana.
Ny fifantohan-tsain'ny mpizahatany dia ny vanim-potoanan'ny fialantsasatra Krismasy, miaraka amin'ireo daty tamponanan'ny fikarohana sidina mankany Hong Kong izay manakaiky ny herinandro 10, 17, 24 desambra. -18 no daty fitsangatsanganana tampon. Tsy mahagaga raha ny ankamaroan'ny olona, ​​mihoatra ny 25%, dia handeha hitsangatsangana na hamangy namana sy havana.
Ny famakafakana lalindalina kokoa dia milaza fa ireo mpivarotra mpivarotra miankina amin'ny fizahantany monina any Hong Kong dia mety ho sambatra kokoa noho ny mpiara-miasa aminy any Singapore; satria ny fampiakarana avy hatrany ny famandrihana sidina avy any Singapore mankany Hong Kong dia avo telo heny mahery noho ny amin'ny lalana mifanohitra.
Tamin'ny 23 martsa, nanambara i Singapaoro sy Hong Kong fa hakatona ny sisintanin'izy ireo amin'ny mpitsangatsangana vahiny rehetra. Nanomboka teo dia saika tsy afaka nanao ny manidina eo anelanelan'ny toerana roa (na amin'ny toerana hafa) ary zara raha nisy olona nitady na nanao fitsangatsanganana.
Jameson Wong, talen'ny APAC, ForwardKeys dia naneho hevitra hoe: "Fandaminana lehibe ity Air Travel Bubble roa tonta ity satria io no fotoana voalohany ahazoana manao fitsangatsanganana iraisampirenena indray eto amin'ny faritra misy antsika. Ny fihazakazahana eo noho eo ny famandrihana eo noho eo dia manan-danja satria manaporofo izany fa te-hivezivezy ny olona ary handeha izy ireo, raha vantany vao apetraka ireo kavina fiarovana azo antoka ary hesorina ny fameperana ny dia ataon'ny governemanta. Ny valim-pikarohanay dia hanome rivotra madio be izay ilaina ary fanantenana ho an'ireo orinasa marobe sy olona miankina amin'ny mpitsangatsangana hahazoana fidiram-bola. Azontsika atao ny manantena ny hahazo tombony ara-nofo amin'ny fangatahana dia, azo antoka fa mihoatra ny zavatra arahinay izao, rehefa ampiharina ny politika ary rehefa nambara ny antsipirian'ny marina momba ny fitsangatsanganana Singapore-HK. Matoky aho fa ny firenena hafa ao amin'ny faritra dia hahita an'ity ho toy ny fanadihadiana tranga hitarihana ny hetsika fanamorana ny dia ataon'izy ireo ato ho ato. ”